मानव शरीरमा हुने ३६ अनौठा तथ्यहरु जो विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ – GoodNews 24 – Good News24
Home/गुड न्यूज 24/मानव शरीरमा हुने ३६ अनौठा तथ्यहरु जो विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ – GoodNews 24
मान्छेको शरीर दुनियाँको आश्चर्यजनक सृस्टि मध्यको एक हो । शरीर देख्दा सामान्य लाग्छ तर मानव शरीरले धेरै नै आश्चर्यजनक रहस्यहरु आफु भित्र समेटेर राखेको छ । मानव शरीरलाई एक मेसिनको रुपमा लिदा केहि फरक पर्दैन । हामीले केहि काम नगरेको अवस्थामा पनि यसले निरन्तर काम गरि रहन्छ । सामान्य देखिने मानव मस्तिष्कले दुनियाँमा यस्ता यस्ता चिज बनाएको छ कि त्यो देखेर स्वयम् हाम्रो मस्तिष्क दंग पर्छ । कुनै पनि क्यामेरा मानव आँखाले भन्दा राम्रो देख्न, खिच्न सक्दैन । दुनियानको कुनै मेसिनले मानव नाकले भन्दा राम्रो गन्धको पहिचान गर्न सक्दैन । अव वैज्ञानिकले यो पनि पत्ता लगाएका छन् कि भबिस्यमा हुन सक्ने कुराको आभास गर्न सक्ने क्षमता पनि कुनै कुनै मानवको दिमागमा भेटिन्छ । साच्चै भन्नु पर्दा मानव शरीर विज्ञानको कुनै प्रयोगशाला भन्दा कम छैन ।
यहि हाम्रो मानव संरचना भित्र लुकाका केहि अनौठा तथ्यहरु यस्ता छन ।
१ ) हाम्रो पेटमा उत्पन्न हुने एसिड यति शक्तिशाली हुन्छ कि यसले ब्लेड पनि पगाल्न सक्छ ।
२ ) हाम्रो फिंगर प्रिन्ट जस्तै जिब्रोमा हुने प्रिन्ट पनि हरेक व्यक्तिमा अलग अलग हुन्छ ।
३ ) यदि मान्छेको पुरा जिन्दगीको र्याल एकत्रित गर्ने हो भने यसले दुइ ओटा स्विमिङ्ग पुल आरामले बन्न सक्छ ।
४ ) हामीले हाच्छ्यु गर्दा हाम्रो शरीरको पुरै प्रणालीले केहि मिलि सेकेण्डको लागि काम गर्न बन्द गरिदिन्छ यहाँसम्म कि हाम्रो मुटुको धड्कन पनि । थाहा छ हाच्छ्यु गर्दा आँखा किन बन्द हुन्छ ? किनकि हाम्रो हाच्छ्युको रफ्तार यति तेज हुन्छ कि आँखाको नानी बाहिर निस्किने खतरा हुन्छ । त्यसैले हाच्छ्यु गर्दा हाम्रो आँखा स्वत बन्द हुन्छन।
५ ) हाम्रो शरीरमा यति फलाम हुन्छ कि सबै एकत्रित गरेर तीन इन्चको काँटी बनाउन सकिन्छ ।
६ ) हाम्रो नाकले पचास हजार अलग अलग गन्ध सुघ्न सक्छ जबकि हाम्रा आँखाहरूले एक करोड रंग चिन्न सक्छन् ।
७ ) हाम्रो शरीरमा यति धेरै ब्याक्टेरियाहरु हुन्छन कि यिनीहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर तौल्दा वजन ४ पाउण्ड हुन आउछ ।
८ ) हाम्रो शरीरमा दैनिक साठी हजार माइलसम्म रगत बहन्छ ।
९ ) जव कुनै चिज हामी छुन्छौ त्यसको जानकारी हाम्रो मस्तिस्कमा १२४ किलोमिटर प्रति घन्टाको गतिमा स्नायुमा पुग्दछ ।
१० ) मान्छेको शरीरमा एक लाख माइल लामो रक्त बाहिनी नली वा ब्लड भेसेल्स हुन्छ ।
११ ) जन्मेपछि हाम्रा आँखाहरूको आकार बढ्दैन जबकि नाक र कान जिन्दगी भर बढिरहन्छन् ।
१२ ) यदि क्यामेराको मेगापिक्सल भनिए जस्तै आँखाको पनि मेगापिक्सल निकाल्ने हो भने मानव आँखा ५७६ मेगापिक्सलको हुन्छ ।
१३ ) हाम्रो आँखाको लेन्स ६५% पानि र ३ प्रतिशत प्रोटिन बाट बनेको हुन्छ ।
१४) कपाल हाम्रो शरीरको सबै भन्दा छिटो बढ्ने तन्तु हो ।
१५ ) विश्वभर भएको जनसंख्याको कहिँ ज्यादा गुणा ब्याक्टेरिया मान्छेको मुखमा हुन्छ ।
१६ ) शरीरको DNA यति धेरै तन्किन्छ कि धर्ति बाट प्लुटो सम्म पुगेर फर्किन सम्म पुग्छ ।
१७ ) एक कदम हिड्नको लागि हाम्रो शरीरका २०० मांसपेशीले एकसाथ कार्य गर्नुपर्छ ।
१८ ) बच्चा हुदा मान्छेको शरीरमा ३०० हड्डी हुन्छन १८ बर्स काटे पछि मात्र २०६ हड्डी हुन्छन । शरीरको विकास हुँदा केहि हड्डीहरु फ्युजन हुन्छन ।
१९ ) साठी वर्ष उमेरको मान्छेले आफ्नो जिन्दगीको २० बर्ष सुतेरै बिताएको हुन्छ ।
२० ) हाम्रो अनुहारको रौ शरीरको कुनै पनि भागमा हुने रौ भन्दा छिटो बढ्छ ।
२१ ) हातका नंग खुट्टाको नंग भन्दा तिन गुणा छिटो बढ्छन ।
२२ ) हाम्रो फोक्सोले दैनिक २० लाख लिटर हावा फिल्टर गर्छ ।
२३ ) मानव दिमागको तौल १५०० ग्रामसम्म हुन्छ तर दिमागको आकार र तौलले यसको क्षमतामा केहि असर गर्दैन ।
२४ ) यदि फोक्सोलाई तन्काइयो भने यसको आकार एक टेनिस कोर्ट जत्रो ठुलो हुन सक्छ ।
२५ ) एक स्वस्थ मान्छेको मुटु एक दिनमा एक लाख पटक धड्किन्छ ।
२६ ) पसिना आफैमा दुर्गन्धित हुन्न तर हाम्रो शरीरको ब्याक्टेरियाको कारणले पसिना दुर्गन्धित हुन्छ ।
२७ ) मान्छे कहिल्यै आफ्नो सास रोकेर आफैलाई मार्न सक्दैन ।
२८ ) शरीरबाट एक घण्टामा यति ताप निस्किन्छ कि ४ लिटर पानी उमाल्न सकिन्छ ।
२९ ) मान्छेले आफ्नो जिन्दगी भर ६० हजार लिटर पानि पिउन सक्छ ।
३० ) किस गरेर भन्दा, हात मिलाउदा एक शरीरबाट अर्काको शरीरमा किटाणु प्रवेश गर्ने सम्भावना बढि हुन्छ ।
३१ ) ३० मिनेट एयर फोन प्रयोग गर्नाले कानमा जिवाणुको संख्या सात सय गुणा बढ्छ ।
३२ ) दुनियाँमा ६० प्रतिशत मान्छेको एउटा खुट्टा अर्को खुट्टा संग बराबर छैन ।
३३ ) हाम्रो मुटु हरेक दिन यति धेरै उर्जा पैदा गर्छ कि एउटा ट्रक ३२ किलोमिटर सम्म चल्न सक्छ ।
३४ ) सुतेको अवस्थामा हाम्रो नाकले कुनै पनि गन्ध सुघ्न सक्दैन
३५ ) हामीले खाने खाना पचाउने इन्जाइम मृत्युको ३ दिन पछि शरीरलाई नै खान थाल्छन ।
३६ ) हाम्रो जिव्रोले एक अरब भन्दा धेरै स्वाद छुट्याउन सक्छ ।
छैन त अचम्मको ? त्यसैले सेयर गराैं ।
कर्णाली दिगो विकास लक्ष्यको तथ्याङ्क सार्वजनिक-GoodNews24